मेरो पिज्जा आउटलेट 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
मेरो पिज्जा आउटलेट
अघिल्लो खेल: बिहानको खाजा ..
बिहानको खाजा तयार पार्नुहोस् के तपाई खाना पकाउन चाहानुहुन्छ? के तपाईं पश्चिमी खानाको मास्टर बन्न चाहनुहुन्छ? ब्रेकफा [...]
अर्को खेल: ऐस मोटो राइडर
ऐस मोटो राइडर वार्षिक अफ-रोड मोटरसाइकल दौड सुरु हुन लागेको छ, उत्साह ट्र्याक [...]
मेरो पिज्जा आउटलेट खेल आदर्श फास्ट फूड कुकिंग खेल हो जहाँ तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूको लागि पिज्जा बनाउन सक्नुहुन्छ! प्रत्येक "पिज्जा अर्डर कल" लिनुहोस्, पिज्जा बनाउनुहोस् र बेच्नुहोस् र ग्राहक समीक्षा प्राप्त गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूलाई निराश गर्नुहुन्न, ध्यानपूर्वक विधि अनुसरण गर्नुहोस् र पिज्जा समयमै डेलिभर गर्नुहोस्!
# कुकि।# पिज्जाकेटीहरूमोबाइल